Special Features for Personal Account
Personal account is an account that arranges personal information for individuals.
Personal account can perform shopping, sending money, receiving money, sending the donation using Online.
The Amount of Add Funds into MyanPay Personal Account
You can add funds from at least 1,000 Kyats to 2,000,000 Kyats at most.
Your MyanPay Personal Account must have at least 1,000 Kyats.
The Requirements for creating Personal Account
You must beaMyanmar citizen and your age must be over 16 years.
You must haveamobile phone number of Myanmar (MPT, MecTel, Teloenor, Ooredoo).
You can securely and safely receive money by using MyanPay from the Internet.
MyanPay provides services that receive money transferring from your friends, customers/Members, and families in several ways for 24 hours.
You will receive money immediately in your MyanPay Balance as soon as your friends, customers/Members, and families transfer money to you.
You can immediately know the receiving of money with SMS Alert to your mobile phone and therefore you don’t need to be online every time.
You can withdraw received money from your MyanPay Account to your bank account or MPU Card.
Why should you use MyanPay?
Personal Account သည် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားသော Account အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
Personal Account သည် Online တွင် ဈေးဝယ်ယူခြင်း၊ ငွေပေးပို့ခြင်း၊ ငွေလက်ခံခြင်း၊ လှုဒါန်းငွေပေးပို့ခြင်း စသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာအား ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
အနည်းဆုံး ငွေကျပ် တစ်ထောင် (၁,၀၀၀) ကျပ်မှ စ၍ အများဆုံး ငွေကျပ် ၂ဝ သိန်းအထိ ထားရှိနိုင်ပါသည်။
MyanPay Personal Account တွင် အနည်းဆုံး ငွေကျပ် တစ်ထောင်ကျပ် လက်ကျန်ထားရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Personal Account ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ
မြန်မာနိုင်ငံသား၊ အသက် (၁၆) နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
MyanPay အသုံးပြု၍ အင်တာနက်မှတဆင့် လုံခြုံစိတ်ချ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
MyanPay ကို အသုံးပြု၍ အင်တာနက်မှတဆင့် လုံခြုံစိတ်ချစွာ ငွေလက်ခံမှု ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
MyanPay သည် လူကြီးမင်းတို့၏ မိတ်ဆွေ၊ မိသားစု၊ Customers/Members များမှ ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပေးပို့လိုက်သော ငွေကြေးများကို လက်ခံရယူခြင်းအား ၂၄ နာရီပတ်လုံး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ထောက်ပံပေးထားပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ မိတ်ဆွေ၊ မိသားစု၊ စားသုံးသူ (Customers/Members) များမှ ငွေပေးပို့လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် လူကြီးမင်း၏ MyanPay Balance အတွင်းသို့ ချက်ချင်း ရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ MyanPay Account မှ လက်ခံရရှိသော ငွေများအား မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် (သို့မဟုတ်) MPU Card များအတွင်းသို့ လွယ်ကူစွာ Withdraw ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။